Ukusungulwa kweNethiwekhi yoKhenketho lweHlabathi: Kuyamangalisa nje
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » Ukusungulwa kweNethiwekhi yoKhenketho lweHlabathi: Kuyamangalisa nje
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Education • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Icandelo lokungenisa izihambi • LGBTQ • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Le nyanga kukuphehlelelwa kwefayile ye- Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi (WTN). Uzalelwe kwindawo ethandwayo ukwakha kwakhona Ingxoxo, iNethiwekhi yezoKhenketho yeLizwe lilizwi ekudala liphelelwe lixesha lokuhamba kwamashishini amancinci naphakathi kunye namashishini ezokhenketho kwihlabathi liphela.
Ngokumanyanisa iinzame, i-WTN izisa phambili iimfuno kunye neminqweno yamashishini amancinci naphakathi kunye nabachaphazelekayo.
Iminyhadala yokuphehlelelwa ayimangalisi kwaye ibandakanya abadlali bezokhenketho abavela kumazwe ali-123.
NgoLwesine, u-Sheikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa, uMongameli we-Bahrain Authority yeNkcubeko ne-Antiquities, uzakukhokela iphaneli ephezulu yeenkokheli zokhenketho, abaphathiswa, kunye nabo babesakuba ngo-Nobhala Jikelele we-UNWTO abaquka uGqirha Taleb Rifai. Ungowesifazane wokuqala otyunjwe kwisikhundla sikaNobhala Jikelele we-UNWTO kwaye waziwa ngempumelelo yakhe ekuxhaseni ulondolozo lwenkcubeko kunye nokhenketho oluzinzileyo.
NgoLwesithathu, umsitho wokuvula ngokusesikweni uza kwazisa izahluko zalapha ekhaya eziqala kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi. “Singumbutho ozokwakhiwa ukusuka ezantsi phezulu. Izahluko namaqela ethu ahlukeneyo aqhuba umbutho wethu, utshilo uJugengen Steinmetz, ilungu elisekayo, nokwangumpapashi eTurboNews.
Uluhlu olukhulayo lwamaqela anomdla lubandakanya iingxoxo malunga nokuhamba ngenqwelomoya, utyalo-mali, uqeqesho, imozulu, izixeko ezincinci zenkcubeko, kunye ne-COVID-19.
Enye yezinto ezibalaseleyo iya kuba kukubhiyozela Ukukhumbula iminyaka engama-35 yoXolo ngezoKhenketho. Umseki we-InIZiko leZizwe ngezizwe loXolo ngezoKhenketho (IIPT) izisa iphaneli yamanye amazwe.
UNjingalwazi Geoffrey Lipman wenza ipaneli malunga nohambo oluhambelana nemozulu, kwaye Iphaneli kaVijay Poonoosamy iya kuhlalutya uMceli mngeni wezoPhapho.
Uninzi lweziganeko kunye neepaneli ezivela kumalungu e-WTN ziya kuboniswa ngoDisemba. Zonke iinkcazo-ntetho ziya kusasaza ngqo eTurboNews kunye namanye amaqonga eendaba ali-16, Livestream.travel, imidiya yoluntu, iSpotify kunye neApple. Iingcaciso-ntetho ziya kuphindwa zijikelezwe zijikeleze iinyanga ezimbini ezizayo. Kusimahla ukubakho nokubuza imibuzo. Bhalisa kwi www.wtn.travel/expo
I-WTN iseke umboniso wayo wehlabathi kwaye wayibiza ngokuba yi-World ExpoTravel. Iqokelela yonke imiboniso kwiqonga elinye leVIMEO www.lifumancl.com
I-WTN ifuna wonke umntu oshishino lokuhamba kunye nabahlobo beshishini lokuhamba ukuba bajoyine iqela www.wtn.travel/expo
Bhalisa kwi-Expo yeHlabathi eqhubekayo yi-World Tourism Network
UTaleb Rifai Louis D'Amopre
UDeepak Joshi kunye noPankai
UGqr Taleb Rifai